MODA | Article Detail | ပြန်လည် ခေတ်စားလာဦးမယ့် 90S' SNAP CLIP လေးများ
ပြန်လည် ခေတ်စားလာဦးမယ့် 90S' SNAP CLIP လေးများ
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က ညှပ်ဖူးတဲ့ ဖိညှပ်ကလစ်လေးတွေက နေရာပြန်ယူလာပါပြီ။
by Su Yi Htet
ဒီနေ့ခေတ်မှာ 90 နှစ်များဆီက ဆံပင်ပုံစံတွေက ပြန်အသက်၀င်လာပြီဖြစ်သလို 90 ခုနှစ်များဆီက Hair Accessories တွေကလည်း ပြန်ခေတ်စားလာပြန်ပါပြီ။ Fall Runway ရဲ့ Alexander Wang ပွဲမှာဆိုရင် Claw Clip တွေကို ပြန်သုံးထားတာ တွေ့ရသလို Prabal Gurung ပွဲမှာဆိုရင် နောက်ကို လှန်ဖြီးတဲ့ ဘီးကုပ်တွေကို ပြန်အသုံးချထားတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအသုံးအဆောင်တွေဟာ 90 နှစ်များဆီကတည်းက
ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Hair Accessories တွေချည်းပါပဲ။
အဲဒီလို 90’s Accessories တွေထဲကမှ ဖိပြီး ညှပ်လိုက်ရတဲ့ Snapclip တွေဟာ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တည်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ကလစ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ညှပ်မယ့်အခါ ကလစ်လေးကို ခွာ၊
ဆံပင်လေးထည့် ပြီးမှ ဖိညှပ်လိုက်ရတဲ့ ကလစ်လေးတွေကို မိန်းကလေးတော်တော်များများ အမှတ်ရကြမှာပါ။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက်မှာ ကျန်ခဲ့ရာကနေ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အထာကျတဲ့ကောင်မလေးတွေ၊Influencerတွေ၊Runway Show တွေကနေ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ပြီးရေပန်းစားလာတယ်လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် 2016 မှာတုန်းက Solange ဟာ CFDA Awards ပွဲမှာ Snap Clip တွေကိုဆံပင်ရှေ့နားမှာ ခပ်များများ ညှပ်လာခဲ့ဖူးသလို Miley Cyrus ဟာလည်း James Corden ရဲ့ Carpool Karaoke မှာ ပါ၀င်ခဲ့တုန်းက ပုလဲ Snap Clip ကို ပန်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ညှပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Snap Clipလေးတွေကို များမကြာမီ Instagram မှာ ခဏခဏ မြင်တွေ့ရဦးမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Celebrity တွေကြားမှာပါ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ရေပန်းစားလာဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒီလို Snap Clip လေးတွေကို ဖက်ရှင်ကျကျ လိုက်ဖက်အောင်ညှပ်မယ်ဆိုရင် ဆံပင်ရဲ့ တစ်ဖက်တည်းမှာပဲ စုပြီး ညှပ်လိုက်တာမျိုး၊တစ်ချောင်းတည်းမဟုတ်ဘဲ ခပ်များများလေး ညှပ်ပေးတာမျိုး၊ဆံပင်ကို အလယ်ခွဲပြီး ဘေးတစ်ဖက်ဆီမှာ တစ်ချောင်းချင်းခွဲညှပ်တာမျိုး ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
ကဲ..သူများတွေ မလုပ်သေးခင် Snap Clip လေးတွေကို ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်တော့နော်။
Editor:Su Yi Htet
Running Man ကနေ အနားယူမယ့် အချိန်နဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စကို ပြောပြခဲ့တဲ့ Song Ji Hyo
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် လိင်ဆက်ဆံခြင်းက သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား။
အဖြူရောင်ဟာ အခြေခံကျတဲ့ အရောင်တွေထဲမှာပါ၀င်သလို တည်ငြိမ်တဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်တဲ့ လှပထူးခြားတဲ့အရောင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၀တ်စားဆင်ယင်မှူအပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့အလင်းပြန်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီသလို ၀တ်ဆင်ထားသူကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ထင်းလင်းနေစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဖြူရောင်ကိုမှ စွဲစွဲမြဲမြဲ နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မမတို့အတွက် အဖြူရောင်တီရှပ်ရိုးရိုးလေးတစ်ထည်နဲ့ မတူညီတဲ့ Outfit စတိုင်လ်မျိုးစုံကို ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်။
တီရှပ်အဖြူကို Denim ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာလေးနဲ့တွဲ၀တ်ပြီး Sneaker လေးစီးထားတဲ့ပုံစံကတော့ ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှူရှိတဲ့ Minimalist အတွဲအစပ်လေးတစ်ခုပါ။ ရုံးပိတ်ရက်ဟိုနားဒီနားထသွားထလာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြို့အနှံ့ Chill ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုနဲ့လည်းအင်မတန် ကိုက်ညီတဲ့ စတိုင်လ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြီး‌meeting တစ်ခုခုကိုသွားဖို့လည်းရှိတယ် စမတ်ကျကျလေးလည်းဖြစ်ချင်တယ် အရမ်းကြီးလည်း overdressed မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ တီရှပ်အဖြူကို Jean Pant , Style pantလေးနဲ့တွဲပြီး တစ်ထပ် Blazerလေးအပေါ်ကထပ်၀တ်တဲ့ ပုံစံလေးကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါ။ရာသီဥတု ပူပူအေးအေး နှစ်မျိုးလုံးနဲ့လည်းကိုက်ညီသလို ကြည့်လိုက်တာနဲ့စမတ်ကျလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံစံမျိုးကို ကောင်းကောင်းကြီးဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ မိန်းကလေးလည်းဆန်သလို ပျိုမျစ်တက်ကြွလှပတဲ့ပုံလည်းပေါက်စေတဲ့ အတွဲအစပ်လေးလို့ဆိုရမယ့် စကတ်အကားလေးတွေနဲ့တွဲဖက်၀တ်ဆင်ခြင်းပါပဲ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပူအိုက်တဲ့ရာသီနဲ့လည်းကိုက်ညီသလို လန်းဆန်းနုပျိုတဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်ကိုလည်းပိုလို့ဆောင်စေမှာပါ။
ဒါကတော့ မိန်းမသားအရမ်းဆန်တာလည်းမကြိုက်သလို အထာကျကျလေးလန်းချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်သင့်တော်မယ့်ပုံလေးဖြစ်လို့ဆိုရပါမယ်။ မထူမပါးဂျင်းဂျာကင်လေးတွေကို တီရှပ်အဖြူနဲ့ တွဲဖက်၀တ်ဆင်ခြင်းပါပဲ။ ဒါဟာခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ မိန်းမအရမ်းမဆန်ပဲ အထာကျတဲ့ပုံလည်းပေါက်စေသလို ကြည့်ရတာလည်း ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားနိုင်တဲ့ ထသွားထလာစတိုင်လ်တစ်ခုပါ။
နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ တီရှပ်အဖြူကို နှစ်သက်ရာ ဘောင်းဘီ ၊စကတ်တစ်ခုခုနဲ့ တွဲဖက်၀တ်ဆင်ပြီး အပေါ်ကနေဆွယ်တာအပါးလေးထပ်၀တ်တဲ့စတိုင်လ်ပါ။ ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆန်းသလို ရာသီဥတု အပူအအေးနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အပြင် နေပူထဲသွားရလို့ အသားမည်းမှာလည်းမပူရတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီးဆွယ်တာအပါးလေးတွေကမ၀တ်ချင်ရင်‌ ခေါက်ပြီးအိတ်ထဲထည့်ထားလို့ရတဲ့ထိ ပေါ့ပါးပြီးနေရာလည်းသိပ်မယူဘူးလေ။
ကိုယ့်ကောင်မလေးနဲ့ First Dateမှာ မိမိုက်စတိုင်လ်ကျနေဖို့
ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှူဟာ အရမ်းကိုအလေးထားသင့်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ
အခုလို အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ quarantine ကာလမှာ လက်ရှိတွဲလက်စ ချစ်သူစုံတွဲလေးတွေဟာလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကာလကြာ ဝေးကွာနေရမှူကြောင့် အသည်းအသန်ဆုံတွေ့ချင်ကြသလို အိမ်မှာနေရင်း ရင်ခုန်မှူကိုရှာကြရင်းမှ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်ပြီးဘ၀လက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ကာ အပြင်မှာ တွေ့ဆုံခွင့်ရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသူများလည်း အများအပြားရှိကြမှာပါ။ ဒီကပ်ရောဂါကြီးအပြီးမှာ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ စတင်တွေ့ဆုံဖို့အားခဲထားကြတဲ့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ပထမဆုံး First Dateမှာ First Impression ကောင်းကောင်းရဖို့နဲ့ စမတ်ကျသန့်ပြန့်နေဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပထမဆုံးဆုံတွေ့မှူမှာ ကိုယ့်ကောင်မလေးကကိုယ့်ရဲ့၀တ်စားဆင်ယင်မှူကြောင့် ငြိုငြင် စိတ်ပျက်သွားတာမျိုးမရှိရလေအောင် ဘယ်လို စတိုင်လ်လေးတွေကများ ကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းအထောက်အပံ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
အရိုးဆုံးဟာ အဆန်းဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ တီရှပ်အဖြူ (သို့မဟုတ်) အရောင်နုနုလေးနဲ့ Chino Pant လေးတွေတွဲဖက်၀တ်ဆင်တဲ့ပုံစံဟာ ဘယ်တော့မှရိုးမသွားနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး First Date Outfit တစ်မျိုးပါပဲ။ First impression မှာလည်း သန့်ပြန့်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်သာမက အိုဗာတင်း၀တ်လာတဲ့ပုံလည်းမပေါက်ပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့မိုက်နေမှာပါ။ ဒါကိုမှ ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီး Bomber Jacket အပါးလေးထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပဲပေါ့။
Mix Myanmar Chino Pant
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link - Mix Myanmar Chino Pant
နောက်ထပ် ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှူရှိမယ်ပုံစံကတော့ ရှပ်အင်္ကျီသန့်သန့်လေးနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအတွဲအစပ်ပါပဲ။ ကြည့်ရတာလည်းရိုးရှင်းသလို ယောက်ျားပီသစမတ်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့နှလုံးသားကို ကောင်းကောင်းဆွဲဆောင်ညှို့ယူနိုင်မယ့်စတိုင်လ်လေးလို့တောင်ဆိုလို့ရပါတယ်။
NOBODY Men's Wear Long Pant
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link - NOBODY Men's Wear Long Pant
တီရှပ်အဖြူလေးနဲ့ Chino ဘောင်းဘီအတိုနဲ့အတွဲအစပ်ကတော့ လူငယ်လည်းဆန်သလို နုနယ်ပျိုမျစ်မှူကိုဖော်ပြရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ဒါကိုမှ နေပူလို့အသားမဲမှာကြောက်ရင်အပေါ်ကရှပ်အင်္ကျီအရောင်နုနုလေးတွေထပ်၀တ်လို့ရပါသေးတယ်။ ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီပြီး ပေါ့ပါးစမတ်ကျတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးဟာ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီရုံမက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ လူငယ်စုံတွဲလေးလိုအမြင်ရောက်စေမယ့်စတိုင်‌လ်လေးပါပဲ။
Timberland White Tee
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link - Timberland White Tee
ရှပ်အင်္ကျီဖြူဖြူသန့်သန့်နဲ့ နက်ပြာရောင်၊ခဲပုပ်ရောင်လို အရောင်ရင့်ရင့်စတိုင်လ်ဘောင်းဘီ‌လေးတွေတွဲဖက်၀တ်ဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ သန့်ပြန့်စမတ်ကျနေရုံမက မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်အဖြစ်ဦးဆောင်နိုင်မယ့်သူရယ်လို့ ယုံကြည်မှူတစ်ခုကို ပေးစွမ်းလိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမျိုးရှိတာကြောင့် First Date Outfitတွေထဲမှာ မပါမဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်၀တ်စားဆင်ယင်မှူပါပဲ။တအားလည်း overdressed မဖြစ်သလို စမတ်ကျသန့်ပြန့်နေတဲ့ ဒီလိုစတိုင်လ်ကြောင့် ကောင်မလေးကတော့ သင့်ကိုမြင်တာနဲ့ ကြွေကျမြေခမှာ ကျိန်းသေပဲနော်။
Hang Ten Men long pant
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link - Hang Ten Men Long Pant
အရမ်းလည်းလူငယ်မဆန်သလို အရမ်းလည်းလူကြီးမဆန်တဲ့ပုံစံကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Hoodie နဲ့ Sweatpant တွဲစပ်၀တ်ဆင်တဲ့ Outfit မျိုးပါပဲ။ First Dateမှာ သူမနဲ့တွေ့ရဖို့ အရမ်းကြီးကြိုတင်ရင်ခုန်ပြင်ဆင်လုပ်ယူထားရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမပေါက်သလို မြင်လိုက်တာနဲ့ အမိုက်စားကောင်လေးပါလားလို့အမြင်ရောက်သွားစေမယ့်စတိုင်လ်လေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို၀တ်မယ်ဆိုရင် ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေအောင်၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ် ။ လာမယ့်မိုးရာသီနဲ့တော့ ဒီစတိုင်လ်လေးက အံကိုက်ဖြစ်မှာအသေအချာပါ။
Penshoppe Basic Hoodie
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link - Penshoppe Basic Hoodie
#Date Outfit Idea
ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းထဲကို ပြန်လည်စီးမျောလာတဲ့ Tie-Dye Fashion Trend
Tie-Dye တွေနဲ့ ဂေါ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီနော်
ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတွေ၊ Trend တွေနဲ့ လူတွေရဲ့ ဖက်ရှင်အပေါ်ထားရှိတဲ့ အမြင်နဲ့ Taste တွေကလည်း အစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲ နေသလို တစ်ချိန်က Trend တွေက တစ်ပတ်ပြန်လည်လာတာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲ့ထဲကမှ Editor အကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Trend ကတော့ Tie-Dye Print တွေပါ။ Tie-Dye Print တွေမှာ Hyped Culture နဲ့ Street Style အငွေ့အသက်တွေ အများကြီးပါဝင်နေသလို သူ့ရဲ့ Fabric မှာဆိုးထားတဲ့ Tie-Dye Pattern တွေကလည်း အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်လောက်က American Hip-Hop နဲ့ Street Culture မှာ Tie-Dye ဖက်ရှင်တွေရဲ့ အနေအထားက လမ်းမထက်ကနေ High-Luxry Fashion Runway တွေအထိပါရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဒီ Tie-Dye တွေက ကြားမှာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်နေပေမယ့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရဲ့ ဖက်ရှင် ရေစီးကြောင်းထဲကိုတော့ ပြန်လည် နေရာယူလာပါပြီ။ နာမည်ကျော် Celebrity တွေ Model တွေရဲ့ Everyday Fashion မှာလည်း မရှိမဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့ Trend တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလို Quarantine နဲ့ Stay-At-Home လိုအချိန်တွေမှာဆို Tie-Dye Outfit တွေက Celebrity တွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုအများဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။
Tie-Dye တွေရဲ့ Nature ကိုက Street Vibe အပါအဝင် Comfy ဖြစ်တဲ့ Sense ကိုလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း Tie-Dye ကို အများသောအားဖြင့် Boxy T-Shirt တွေ၊ Oversize Hoodie တွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Crop Top တွေမှာတွေ့ရများတာမလား။ Tie-Dye တွေက Colorful ဖြစ်တယ်။ တောက်ပပြီးလန်းဆန်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ အခုလို စိတ်ညစ်စရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ Tie-Dye Outfit တွေကို ဝတ်ဆင်ခြင်းကသင့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်း ပိုပြီး တက်ကြွရွှင်လန်းစေမှာပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း Tie-Dye Print တွေနဲ့ Style ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပုံစံလေးတွေဝတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အရမ်းလည်း Complex မဖြစ်သလို Fashion လည်းကျ၊ Comfy လည်းဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ နေ့ရက်တွေကိုလည်း ပိုပြီး Colorful ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
Sweatshirts and Shorts
မိန်းကလေးတွေအတွက် Tie-Dye Sweatshirt ပွပွတွေနဲ့ဆိုရင် ပြဲနေတဲ့ Distressed Denim Shorts လေးတွေနဲ့ကအရမ်း မိုက်ပါတယ်။ အပေါ်က ပွထားပြီးသားမို့ အောက်က Bottom ကို Denim အတိုနဲ့ တွဲဖက်လိုက်တာက ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Outfit ကိုလည်း Balance ဖြစ်စေပြီး ကြည့်ရတာလည်း သိပ်အားစိုက်ထုတ်ထားတဲ့ ပုံမပေါက်ပဲ ကပိုကရိုလေးနဲ့ ဖက်ရှင်ကျစေပါတယ်။
Tie-Dye တွေဝတ်တဲ့အခါ Jeans Pants အရှည်တွေကိုလည်း မေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ Jeans Pants အနက်၊ အပြာ၊ အဖြူတို့ကို အပေါ်က ကိုယ်ဝတ်တဲ့ Tie-Dye ကာလာအပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်ကို ကစားပြီး Switch လုပ်ပြီးဝတ်ဆင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ T-Shirt ဆိုရင်လည်း ဘောင်းဘီထဲကို Tucked In လုပ်ပြီး ဝတ်လို့ရသလို အပြင်ထုတ်ပြီး ဝတ်တာကလည်း Casual Street Vibe ကိုရရှိစေမှာပါ။
Tie-Dye တွေကို Maxi Dress တွေ၊ Slip Dress တွေ၊ Spaggetii Dress တွေမှာ Print လုပ်ထားတာကလည်း တမူထူးခြားတဲ့ Fashion Style ကိုပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Tie-Dye Maxi Dress အရှည်တွေကို ဝတ်ရင် ဖိနပ်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ သေချာ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ချို့ Tie-Dye Dress တွေ Street Vibe လိုချင်တယ်ဆို Sneaker၊ Leather Boots တွေနဲ့ တွဲကြည့်ပြီး Feminine၊ Vacation Vibe ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Strappy Sandal တွေ၊ Sandal Heels လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ကြည့်ပါ။
ဒီ Style ကတော့ အခုလို ကာလမှာ Cele တွေတော်တော်များများ နှစ်ခြိုက်နေတဲ့ Style လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရမ်း Comfortable ဖြစ်လို့ပါ။ ဟုတ်တယ်လေ။ Top to Toe Tie-Dye ဝမ်းဆက်ထက်ပို Comfort လည်းဖြစ်၊ Convenient လည်းဖြစ်တာရှိဦးမှာလား။ သူက Sweatpants နဲ့ Hoodie/Tee နဲ့တွဲထားတာမို့ Sporty ဆန်ဆန် Trainer တွေ၊ Chunky Sneaker တွေနဲ့ဆို Perfect ပဲ။
Formal လည်းဖြစ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အရမ်းမရိုးပဲ နည်းနည်း Playful ဖြစ်တဲ့ Outfit မျိုးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Tie-Dye ကို Suit (သို့မဟုတ်) Jumpsuit ပုံစံမျိုးလည်း ဝတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံမျိုးကတော့ ပုံမှန်ထက်နည်းနည်း ကွဲထွက်ပြီး အားလုံးကြားမှာပေါ်လွင်နေစေမှာပါ။ Tie-Dye အဆင်ကထင်းနေပြီးသားမို့ Accessory ကို Sunglasses နဲ့ Clutch အိတ်လေးတစ်လုံးလောက် ဆိုလုံလောက်ပါတယ်။
Tie-Dye တွေက Swimsuit တို့ Bikini တို့အနေနဲ့ဆိုလည်း အရမ်းမိုက်ပြီး Sexy ဖြစ်တာကို ဘယ်သူမှ သတိထားမိကြမယ်မထင်ဘူး။ တကယ်တော့ ဒီလို Print ပါတဲ့ Swimsuit/Bikini တွေက နေရောင်ထဲမှာသင့်ရဲ့ကောက်ကြောင်းတွေကို ပိုပေါ်လွင်စေပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလည်း အရမ်း Instagrammic ဖြစ်တဲ့ Trend ပါ။
ကဲ အပေါ်ကလို Tie-Dye အရောင်တောက်တောက်ပပတွေကို အရမ်း Show-Off မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Daily Accessory တွေဖြစ်တဲ့ Sock တို့ Bucket Hat တို့ နဲ့ လက်ကိုင်အိတ်တွေမှာ ထည့်သွင်းပြီး Styling လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Tie-Dye Accessory လေးတွေက သင့်ဝတ်ထားတဲ့ Oufit ရိုးနေရင်တောင် သူ့ရဲ့ Color လေးတွေက Pop-Up ဖြစ်ပြီး သင့်ရှိရင်းစွဲ Style ကို On Trend ဖြစ်စေမှာပါ။
Photo Credits to Pinterest and Original Uploaders
#MODA Style Notes
#Tie Dye Trend
မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ ပိန်မှလှတယ်လို့လက်ခံထားပြီး အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပိန်အောင်ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ပိန်ခြင်း၊၀ခြင်း၊ပုခြင်း၊ရှည်ခြင်း ဘယ်လိုအရာမျိုးမှာမဆို ကိုယ်ပိုင်အလှတရားတွေရှိကြတာကို မေ့မထားသင့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအမြင်ဘက်ကနေပြီး ပိန်လွန်း၊၀လွန်းတာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ တချို့ကလည်းမွေးရာပါမျိုးရိုးကြောင့် ၊တချို့ကလည်းကျန်းမာရေးကြောင့် အမျိုးမျိုးသောခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကွဲပြားလာရတဲ့အပေါ်မှာ မိမိခန္ဓာကိုယ် သန်စွမ်းကျန်းမာနေဖို့အတွက်တော့ မမေ့လျော့သင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့များ ပိန်သွယ်ရုံထက်ပိုပြီး ပိန်ပါးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ကတော့ အ၀တ်အစားရွေးချယ်ရာမှာ ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်လေးတွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလို လိုတာထက်ပိုပြီး ပိန်ပါးလွန်းတဲ့ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ အ၀တ်အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်လေးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ခပ်ပိန်ပိန်ကောင်မလေးတွေရဲ့ အဓိကပိန်တဲ့အထဲမှာ ပေါင်တံနဲ့ လက်မောင်းလေးတွေလည်းအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်တံပေါ်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေဟာ ဆွဲဆောင်မှူရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပေမယ့် ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးပိန်ပါးတဲ့ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ကတော့ ပေါင်တံသေးသေးလေးတွေဟာ ပိုပြီးအရုပ်ဆိုးစေတာမို့ ပေါင်ပေါ်စကတ်လေးတွေကိုလုံး၀ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်နော်။ စကတ်အတိုလေးတွေအစား Maxi စကတ်၊ စကတ်ရှည်ရှည်လေးတွေကသာ ပိုပြီးလိုက်ဖက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိန်ပိန်ပါးပါးကောင်မလေးတွေဟာ အပေါ်အင်္ကျီ၀ယ်ရာမှာ အရောင်နဲ့ Pattern ကိုအထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ အရောင်ရင့်ရင့် ၊ Pattern ကြီးကြီးတွေကို အဓိကထားရွေးချယ်မှသာ ကိုယ့်ရဲ့သေးသွယ်လွန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အာရုံလွှဲလိုက်သလိုဖြစ်စေမှာပါ။
ပိန်ပိန်ပါးပါးကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ အပေါ်အင်္ကျီကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ လက်ရှည်နဲ့ လက်ဖောင်းဖောင်း၊လက်ကားကားပုံစံလေးတွေ အဓိကထား ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီလက်ပေါ်မှာမှ pattern ခပ်ရှုပ်ရှုပ်တွေ၊ အလှဆင်ထားတာတွေများများပါရင် ပိုပြီးတော့လိုက်ဖက်ပြီး လက်မောင်းသေးသွယ်တာကိုလည်းသိသာစေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီလှည့်စားမှူကတော့ တော်တော်များများလည်းသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိန်သွယ်ပါးလျသူတွေအနေနဲ့ အဓိက၀တ်ဆင်သင့်တာကတော့ ရေပြင်ညီအစင်းကြောင်းလေးတွေပါတဲ့အင်္ကျီမျိုးပါပဲ။ လူကိုလည်းအနည်းငယ်ပိုပြည့်သယောင်ဖြစ်စေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ပိန်သွယ်မှူကိုအမြင်လွှဲပေးရာလည်းရောက်ပါတယ်။
ပိန်ပါးသေးသွယ်သူတွေအနေနဲ့ အင်္ကျီရွေးချယ်ရာမှာ အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို မူလထက်ပိုကြီးသယောင်ထင်ရစေဖို့အတွက်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးရွေးချယ်၀တ်ဆင်သင့်တာမျိုးပါ။ ဥပမာ အလွှာအထပ်ထပ် အတွန့်အကားလေးတွေပါတဲ့အင်္ကျီမျိုးတွေကို အဓိက၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အလွှာလေးတွေကြောင့် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပိန်သွယ်မှူကို မသိသာအောင် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ထုထည်တစ်ခုဖန်တီးထားသလိုဖြစ်နေစေ‌တာကြောင့်ပါ။
မိုးရာသီအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖိနပ်များ
ဗွက်တွေကြောင့် ဖိနပ်ပေပြီး စိတ်မညစ်ရအောင် ဘယ်လိုဖိနပ်တွေစီးကြမလဲ
ဘာလိုလိုနဲ့ မိုးရာသီတောင်ရောက်လာပြီနော်။ အခုချိန်မှာ အပူချိန်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပါပြီ။ မုတ်သုန်အရှိန်ကြောင့်ရော၊ မိုးအဝင်မုန်တိုင်းတွေကြောင့်ရော နေရာအနှံ့မှာမိုးတွေရွာနေပြီမို့ လမ်းတွေမှာလည်း ရေတွေနဲ့ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ မိုးရွာလို့နေလို့ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် အပြင်ထွက်တဲ့အခါတော့ နေရာတိုင်းက စိုစိစိုစိနဲ့ သွားရလာရတာ အဆင်မပြေသလို လမ်းပေါ်မှာဗွက်တွေကြောင့်လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ဖက်ရှင်ကို အထူးဂရုစိုက်သူတွေ၊ Sneakerhead တွေအတွက် ခြောက်သွေ့တဲ့ အချိန်တွေမှာလိုမဟုတ်ပဲ အခုလိုမိုးရာသီမှာ အခက်တွေ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အမိုက်စား Sneaker တွေ၊ Leather ဖိနပ်တွေ၊ Fancy Heels တွေကို မိုးရာသီမှာစီးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလို ၊ တကယ်လို့ စီးခဲ့မိရင်လည်း မိုးရေ၊ ဗွက်ရေတွေစိုပြီး ဖိနပ်ကိုလည်း ပျက်စီးစေပါတယ်။
အဲ့လိုတွေ စိတ်မညစ်ရအောင် မိုးရာသီနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ရေစိုခံတဲ့ Waterproof ဖိနပ်တွေကိုစီးတာက ဒီအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေအခြောက်မြန်တဲ့ဖိနပ်မျိုးတွေကိုလည်း ဦးစားပေးစီးဖို့ Recommand လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေစိုနေတဲ့ဖိနပ်တွေက အနံ့အသက်မကောင်းတဲ့အပြင် ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပေါက်ဖွားစေနိုင်သလို အခန့်မသင့်လို့ ဖိနပ်ကို တစ်နေကုန်စီးထားရင် အအေးပတ်တာတွေလည်း ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
ဒါကြောင့် မိုးတွင်း စိုထိုင်းထိုင်းမှာ ဖက်ရှင်လည်းကျစေသလို ရာသီဥတုနဲ့လည်း အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဖိနပ်ကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ Flip Flop ကတော့ သင့်ကိုမိုးရာသီရဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ ဖိနပ်တွေ ဒဏ်က ကယ်တင်ပေးမယ့် တစ်ခုတည်းသောဖိနပ်ပါ။ ကြည့်ရတာသမားရိုးကျဆန်တာမှန်ပေမယ့် ပေါ့ပါးပြီးသယ်ဆောင်ရတာလည်း လွယ်ကူတာမို့ Flip Flop ကတော့ မိုးတွင်းမှာ မဖြစ်မနေရှိထားသင့်တဲ့ဖိနပ်ပါ။ အခုချိန်မှာ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း Flip Flop Brand တွေကလည်း ဈေးကြီးတာကနေ ဈေးနည်းတာအထိ အစားစားရှိတာမို့ ရွေးချယ်စရာလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
နည်းနည်းလည်း ဖက်ရှင်ပိုကျချင်တယ်၊ ခြေညှပ်ဖိနပ် (Flip Flop) တွေကိုလည်း မစီးချင်ဘူးဆိုရင် ကွင်းထိုးဖိနပ် (Slides) တွေက အဆင်ပြေမှာသေချာပါတယ်။ နာမည်ကျော် Sportwear Brands တွေကလည်း Pool Slide တွေကို အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်နေတာမို့ တစ်ရံလောက်ရှိရင်ကို မိုးရေထဲမှာ အထာကျဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
ဒီဖိနပ်က နည်းနည်း ကြောင်တောင်တောင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် Post Malone အပါအဝင်နာမည်ကျော် Celebrity တွေတော်တော်များများ စီးတဲ့ဖိနပ်မို့ အထင်တော့ မသေးစေချင်ပါဘူးနော်။ Clogs ရဲ့ Structure က ခပ်လုံးလုံးနဲ့ ထုကြီးပေမယ့် အရမ်းအကြမ်းခံပြီး မိုးတွင်းမှာ ဘယ်လောက်စီးစီးသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ဖိနပ်မျိုးပါ။
Rubber သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့၊ မိုးစိုခံတဲ့ ကြိုးသိုင်း Sandal တွေကလည်း ဒီရာသီမှာ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖိနပ်တွေပါ။ Sandal ကိုမှ Sole အနိမ့်အမြင့် အမျိုးမျိုးရှိသလို အဆင်ဒီဇိုင်းတွေကလည်း မရိုးရအောင် Strap အမျိုးအစားတွေလည်း များစွာရှိတာမို့ ဖက်ရှင်မကျမှာတော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
Ankle Lace Up Boots and Chelsea Boots
Dr.Martens Ankle Boots တွေကလည်း သင့်ခြေထောက်တွေကို ဗွက်ရေတွေနဲ့ စိုစွတ်တဲ့ လမ်းတွေဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးမှာပါ။ Leather သား (သို့) Plastic/Jelly သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Chelsea Boots တွေကလည်း အလားတူပါပဲ။ သူက ခြေမျက်စိလည်းဖုံးတာမို့ အပေါ်က ဘောင်းဘီဝတ်ဝတ်၊ Skirt ဝတ်ဝတ် ရေစင်ဗွက်စင်တာတွေကလည်းကကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးရေထဲကပြန်လာရင်တော့ ဖိနပ်ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဒီဖိနပ်လေးတွေကတော့ မိုးတွင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဥတုရာသီမရွေး မိန်းကလေးတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဖိနပ်လေးတွေပါ။ Jelly Shoes လေးတွေက Plastic၊ Rubber နဲ့ PVC အသားတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ မိုးရေကို 100% ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အခြောက်မြန်တာမို့ သက်တောင်သက်သာမရှိမှာတော့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ဖက်ရှင်ကျကိုကျနေစေမယ့် မိုးတွင်းစီးဖိနပ်ထဲမှာပါပါတယ်။
Photo credit from Pinterest.
#Shoes for Rainy Season
ဖက်ရှင်ကျတဲ့အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်တော့မှမပြောပြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ဖို့အတွက်
မိန်းကလေးအများစုဟာ အလှအပကိုနှစ်သက်ကြပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်အလှအပအပေါ်မှာ ယုံကြည်ချက်ရှိမှူကတော့ လူနည်းစုမှာသာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းက လူတိုင်းမှာ သူ့ဟာနဲ့သူ အလှကိုယ်စီရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို မေ့မထားသင့်ပါဘူး။ ပိန်တဲ့သူဟာ ပိန်တဲ့အလျှောက် ၊၀တဲ့သူဟာ ၀တဲ့အလျှောက်၊ အရပ်ပုသူဟာ ပုတဲ့အလျှောက် ၊အရပ်ရှည်သူဟာရှည်တဲ့အလျှောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိမှူ ၊ confidentရှိရှိ၀တ်စားဆင်ယင်တတ်မှု တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကြည့်လို့ကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်းတွေ ကွဲပြားသွားကြတာပါ။ ဒီမိန်းကလေးက ကြည့်လိုက်တာနဲ့မိုက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးဟာ သူ့မှာရှိတဲ့ ယုံကြည်မှုရဲ့ အရှိန်အဝါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စတိုင်လ်ကျတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုတာဟာလည်း အတင်းလုပ်ယူထားသလိုမျိုးဖြစ်မနေပဲ သဘာ၀ကျကျကို ကြည့်ကောင်းနေတာမျိုးပါ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီလို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိတဲ့ မိမိုက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုအချက်တွေ အဓိက လိုအပ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
1. ကိုယ့်အကြိုက်ကိုကိုယ် ကောင်းကောင်းသိပါ
စတိုင်လ်ကျတဲ့ အမျိုးသမီး‌တစ်ယောက်ရဲ့အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ဘာကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်သလဲ ၊ကိုယ်ဘာကို တကယ်ကြိုက်သလဲ ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့အချက်ပါပဲ။ အဲဒီလိုကိုယ်ဘာကိုလိုမှန်းအတိအကျသိပြီး ဘယ်လိုအရာတွေကိုပဲစုဆောင်း၀ယ်ယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
2. အခြေခံကျတဲ့အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင်တွေစုဆောင်းပါ
အခြေခံကျတဲ့အ၀တ်အစား၊အိတ်၊ဖိနပ် လက်၀တ်ရတနာတချို့ကို စုဆောင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ အခြေခံကျတဲ့အရာဆိုတာဟာ ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပဲ တွဲဖက်၀တ်၀တ် လိုက်ဖက်နေမယ့် အသုံးအဆောင်မျိုးတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ - jacket အနက် သို့မဟုတ် အရောင်နုနုတစ်ထည် ၊ Tshirt အမည်းတစ်ထည် ၊ ရှပ်အဖြူတစ်ထည်၊ နာရီကောင်းကောင်းတစ်လုံး ၊ အိတ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးနဲ့ ဘာနဲ့တွဲ၀တ်၀တ်အဆင်ပြေမယ့် ဖိနပ်ကောင်းကောင်း တစ်ရန် အစရှိသဖြင့်ပါ၀င်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ဈေးကြီးချင်ကြီးပါစေ အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေထဲကနေ ရွေးချယ် စုဆောင်းထားသင့်ပါတယ်။
3. ပေါ်လွင်ထင်ရှား ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ
Style ကျတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ပေါ်လွင်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုပြီး ကိုင်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ အမိုက်စား လက်ကိုင်အိတ်ကြီးကြီးတစ်လုံး၊ဒါမှမဟုတ် မာဖလာလန်းလန်းတစ်ထည် ၊ ဖိနပ်ခပ်မိုက်မိုက်တစ်ရန် စသဖြင့် သိသာထင်ရှားတဲ့ အသုံးအဆောင်တစ်ခုခုကို သူတို့ကိုယ်မှာ ကိုင်ဆောင်၀တ်ဆင် ထားတတ်ကြပါတယ်။
4. ဘယ်လိုတွဲစပ်ရမလဲဆိုတာ သိပါစေ
ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ခြင်းဟာလည်း စတိုင်လ်ကျတဲ့မိန်းမသားတစ်ဦးဖြစ်ဖို့မှာ အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အတွဲအစပ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့အတွက် မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Blog တွေ ၊Websiteတွေ ၊မဂ္ဂဇင်းတွေကိုများများကြည့်ပြီးလေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးရင် ခေါင်းအစခြေအဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်းကို၀တ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ကျောက်ကျောအလွှာလေးတွေဟာ မတူညီတဲ့အရောင်ကွဲပြားမှူကြောင့်လှပနေရသလိုမျိုးပဲ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ ကွဲပြားတဲ့ အရောင် ၊ ဒီဇိုင်း ၊ အသား နဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကို ကျကျနနရွေးချယ်၀တ်ဆင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
5. ဈေးကြီးတာ၀တ်မှလှမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို မေ့လိုက်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှူပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့၀င်ငွေပမာဏနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့်အရာကို၀ယ်ယူတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။ Branded ကြီးတွေပဲ၀တ်မှမဟုတ်ပဲ သာမာန် Export quality ဆိုင်မျိုးတွေကစလို့ Shopping Center ထဲကဆိုင်တွေအထိ လှပစမတ်ကျတဲ့အ၀တ်အစားအသုံးအဆောင်ရွေးချယ်စရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ စမတ်ကျနေတဲ့ outfit မျိုးဖြစ်ပါစေ။ ဥပမာ ရင်ဘတ်မှာ စာတန်း (သို့မဟုတ်) အပွင့်အခက်တွေပါတဲ့အ၀တ်အစားမျိုးဟာ နောက်တစ်ခါထပ်၀တ်ရင် မှတ်မိလွယ်ပေမယ့် ၊စာတန်းတွေအပွင့်အခက်တွေမပါတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဒီဇိုင်းလှလှအ၀တ်အစားကတော့ နောက်တစ်ခါပြန်၀တ်လည်း အရင်၀တ်ပြီးသားကြီးပါလားလို့ ဂရုစိုက်မိဖို့ခက်ခဲတာမို့ ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းကိုသာပိုမိုရွေးချယ်သင့်တာမျိုးပါ။ဒီလို ငွေကုန်ကြေးကျနည်းနည်းနဲ့ Classy ဖြစ်ဖြစ်၀တ်စားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်း ဒီ Link လေးမှာ ၀င်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Neutral Color တွေကို အထာကျအောင် ဘယ်လို၀တ်မလဲ
အရောင်တွေထဲမှာ Neutral Color လိုအရောင်မျိုးတွေဟာ တည်ငြိမ်မှူ ၊ ရင့်ကျက်မှူ နဲ့ ရိုးရှင်းမှူတွေကိုပေးရုံမက ရွေးချယ်မှူမှန်ကန်ရင်မှန်ကန်သလို ဖက်ရှင်ကျပြီးအမြင်အေးစေတဲ့အရောင်မျိုးထဲမှာပါ၀င်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ အ၀တ်ဗီဒိုထဲမှာ ဒီလို Neutral Color အ၀တ်အစားတွေဟာ ရှိကိုရှိသင့်သလို အတော်များများမှာလည်း ဒီအရောင်အ၀တ်အစားတွေကို အနည်းနဲ့အများ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ပဲအမြင်အေးပြီး Minimalist ဖြစ်တယ်ဆိုပါစေ သူ့ချည်းပဲအမြဲတစေ ၀တ်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကိုရိုးရှင်းလွန်းပြီး ကြည့်ရတာခပ်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ အရောင်မထွက်ရိုးအီသလို ခံစားရတာမျိုးတခါတရံရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလို ရိုးရှင်းတဲ့ Neutral color အ၀တ်အစားတွေကို အမြင်ဆန်းပြီး စတိုင်လ်ကျမိမိုက်နေအောင် ဘယ်လိုအရာတွေနဲ့တွဲဖက်၀တ်ဆင်သင့်လဲဆိုတာကို အောက်ကအချက်လေးတွေမှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
ရိုးရှင်းပေမယ့် ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတာမျိုးကိုနှစ်သက်သူတွေအတွက် Monochromatic ပုံစံလေးနဲ့ စတင်လိုက်ပါရစေ။ Monochromatic Style ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အရောင်ကို color tone အနည်းငယ်ကွာခြားအောင်၀တ်ဆင်တဲ့ စတိုင်လ်မျိုးပါ။ အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ အနုနဲ့အရင့်တွဲဖက်၀တ်ဆင်တာပါပဲ။ ကိုယ်က Neutral color ခဲရောင်ကိုရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုရင် အင်္ကျီနဲ့ဘောင်းဘီ (သို့မဟုတ်) စကတ်ကို ခဲရောင် အနုနဲ့အရင့် မတူအောင်တွဲဖက်၀တ်ဆင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမြင်လည်းလှသလို ဖက်ရှင်လည်းကျပြီး ရိုးအီတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေမယ့် လှပတဲ့ အတွဲအစပ်တစ်ခုပါပဲ။
Semi Fit Tee ( Penshoppe )
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link - Slim Fit Tee ( Penshoppe )
ကိုယ်၀တ်ဆင်မယ့် Neutral color ၀မ်းဆက်ကြားထဲမှာ ဘာမှမဆိုင်ပဲကွဲထွက်နေမယ့် အရောင်ဆန်းဆန်းတစ်ခုကို ပေါင်းထည့်၀တ်ဆင်တာမျိုးကလည်း မြင်ရသူကို အမြင်ဆန်းစေသလို ဖက်ရှင်လည်းကျစေမှာပါ။ ဥပမာ - Neutral color ဘောင်းဘီနဲ့ အင်္ကျီကို အရောင်ကွဲထွက်မယ့် အပေါ်ထပ် jacket နဲ့၀တ်တာမျိုး ၊ ဒါမှမဟုတ် အရောင်ကွဲထွက်နေတဲ့ လက်ကိုင်အိတ်တစ်ခုကိုကိုင်ဆောင်တာမျိုးပေါ့။ တစ်နေရာတည်းကို Hightlight လုပ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ အရမ်းလန်းနေစေမှာမို့ ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့သူတွေက အရမ်း၀တ်တတ်စားတတ်တာပဲလို့တောင် ချီးကျူးနေကြပါဦးမယ်။
FORCAST Belen Jersey Skirt (Forecast)
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link- FORCAST Belen Jersey Skirt (Forecast)
3.Neutral Color နဲ့ ဂျင်းအတွဲအစပ်
Casual လည်းဆန်ပြီး ထသွားထလာအတွက်ရော ရုံးသွားသင်တန်းသွားအတွက်ပါ အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ Denim နဲ့ Neutral တို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှူပါပဲ။ Denim ဂျင်းဘောင်းဘီကို Neutral color တီရှပ်နဲ့တွဲဖက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊Neutral color အပေါ်ထပ်နဲ့တွဲဖက်၀တ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ရိုးရှင်းပြီး မိမိုက်နေမှာပါ။ အရောင်လိုက်ဖက်ပါ့မလားလို့တောင်စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အတွဲအစပ်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
G-TREE Lady Long Pants-Skinny-Blue (G-Tree)
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link- G-TREE Lady Long Pants-Skinny-Blue (G-Tree)
မိန်းကလေးဆန်ပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်ကိုဆောင်စေတာကတော့ flower outfit လေးတွေနဲ့တွဲဖက်၀တ်ဆင်ခြင်းပါပဲ။ သင့်ရဲ့ရိုးရှင်းတည်ငြိမ်လှတဲ့ Neutral colorမှာ သဘာ၀တရားရဲ့ရှင်သန်မှူ ကိုပေါင်းထည့်လိုက်သလိုပါပဲ။ လှပပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့အသွင်ကိုမှ တည်ငြိမ်မှူနဲ့ရောယှက်ပြီး ဆွဲဆောင်မှူတစ်မျိုးလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်ကောင်းနေစေမှာပါ။
MDS Myanmar Yeli Wrapped Dress in White Floral (MDS)
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link- MDS Myanmar Yeli Wrapped Dress in White Floral (MDS)
5.Neutral Color နဲ့ Accessories
Neutral color outfit တွေကို၀တ်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင် Accessorie တွေကိုလည်းချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ Neutral color အ၀တ်အစားတွေရဲ့ရိုးရှင်းမှူကို အိတ်၊ဖိနပ်၊လည်စည်းပုဝါ၊ ခေါင်းစည်းကြိုးလို Accessorie တွေက ပြန်လည်ထိန်းကျောင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Neutral color အင်္ကျီနဲ့ Neutral Color လက်ကိုင်အိတ်ကိုတွဲဖက်ခြင်းမျိုးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းပြီး လိုက်ဖက်နေမှာဖြစ်သလို ၊Neutral Color ဖိနပ်တစ်ရံကလည်း သင့်ရဲ့ Neutral Color outfit ကို ပိုမိုပြီးပြည့်စုံဖို့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ထောက်ပံ့ပေးသွားဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။
D&C Myanmar Women Leather Shoes (D&C)
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် Link- D&C Myanmar Women Leather Shoes (D&C)
Sneaker တစ်ရံဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားဖို့လိုလဲ
Sneaker တစ်ရံဝယ်ပြီးမှ နောင်တရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်….
ဖက်ရှင်ကိုရူးသွပ်သူတိုင်းမို့ Sneaker ဆိုတာ မရှိမဖြစ် ဖက်ရှင် Statement ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ဖက်ရှင်ကျသူတိုင်းမှာ အနည်းဆုံးတော့ သူနဲ့သင့်တော်တဲ့ Sneaker တစ်ရံတော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။ Fashion Industry ခေတ်အဆက်ဆက်မှာလည်း အမြဲသရဖူဆောင်းလာတဲ့ ဖိနပ်မို့ High-Fashion Seeker တွေ Fashionista တွေတင်မကပဲ ဖက်ရှင်ကို ရူးသွပ်ပြီးခေတ်မီတဲ့သူတိုင်းအတွက် Sneaker တွေက အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာအမြဲ ပါဝင်နေဦးမှာပါ။
မိန်းကလေးတွေရော ယောင်္ကျားလေးတွေရော Sneaker ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါ ကိုယ်အတွက် Perfect ဖြစ်တဲ့ Sneaker ကိုရှာရတာ တော်တော်ခေါင်းစားရပါတယ်။ ဘယ် Sneaker ကိုဝယ်ရမှန်းမသိတာတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Sneaker ကိုရှာမတွေ့တာတွေ၊ ဝယ်ပြီးမှ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ ပြဿနာတွေက ခဏခဏကြံရတာမို့ Sneaker တစ်ရံကိုကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ Sneaker အသစ်တစ်ရံလိုချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ဝယ်တော့မယ်ဆို ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေထည့်သွင်းစဉ်းစားထား ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးအသင့်တော်ဆုံး Sneker ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ ဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါလည်း စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေမှာပါ။
ဒီတော့ Sneaker တစ်ရံဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်…..
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Sneaker အမျိုးအစားကိုခွဲခွဲခြားခြားသိမြင်အောင်အရင်ဆန်းစစ်ပါ
ဖိနပ်မဝယ်ခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ် Style၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Sneaker Type ကို သိထားတာကပိုကောင်းပါတယ်။ သင်က Sport/Running အတွက်လိုချင်တာလား။ Comfort အတွက်အသားပေးပြီး စီးချင်တာလား။ အဲ့ဒါမျိုးဆို Adidas Ultra Boost၊ Yeezy 350 နဲ့ Yeezy 700 တို့ကသင့်တော်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖက်ရှင်ကိုအသားပေးပြီးစီးချင်တာဆိုရင်တော့ Designer Brand Sneaker တွေ၊ Chunky Sneaker တွေကိုပိုပြီး ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သင့်စီးချင်တဲ့ Sneaker Type နဲ့အမျိုးအစားကိုသိတော့မှာ အသင့်တော်ဆုံး Sneaker ကိုရှာလို့ရမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ Budget ကို အရင်ဆုံးတွက်ချက်ပါ
ကိုယ်က ဖိနပ်တွေအကုန်လုံးဝယ်စုရတာဝါသနာပါတဲ့ Sneakerhead မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖိနပ်ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ကိုယ် Spend လုပ်မယ့် Budget Limit ကိုချင့်ချိန်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Sneaker ဝယ်ယူတဲ့ အမြင်တွေမတူညီကြပါဘူး။ တစ်ချို့က Adidas Sneaker တွေသုံးလေးရံ ဝယ်မယ့်အစား GUCCI Rhyton တစ်ရံတည်းဝယ်လိုက်တာကပိုပြီး Worth ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ အဲ့လို GUCCI Rhyton တစ်ရံပေးဝယ်မယ့်အစား များများစားစားလည်းစီးရ Efficient လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး Adidas Sneaker တွေသုံးလေးရံဝယ်တာကို ပိုနှစ်ခြိုက်တယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဈေးကြီးတာနည်းတာထက် ကိုယ် Spend လုပ်တဲ့ Budget အတွင်းတန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီအချက်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Yeezy အရမ်း Trendy ဖြစ်လို့ဆိုပြီးလည်း မဝယ်ပါနဲ့။ Nike AirForce1 အဖြူက၊ Nike Jordan က လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေလို့ဆိုပြီးလည်း မဝယ်ပါနဲ့။ Market ထဲမှာ Instagram ပေါ်မှာ၊ Hot ဖြစ်နေလို့ လိုက်ဝယ်တယ်ဆိုတာထက် ဒီ Sneaker ကို ကိုယ့်ရဲ့ Personal Taste အရ တကယ် ကြိုက်တယ်ဆိုမှ ဝယ်ပါ။ Popular ဖြစ်လို့လိုက်ဝယ်တာထက် ကိုယ် Taste နဲ့တကယ်ကိုက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ဖိနပ်ကမှ Perfect Sneaker တစ်ရံဖြစ်စေမှာပါ။
ကိုယ်စီးမယ့် Lifestyle နဲ့ရော Adaptable ဖြစ်ရဲ့လား
Lifestyle နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတာ ကဒီလိုပါ။ ကိုယ်ဝယ်မယ့် Sneaker ကကိုယ့်ရဲ့ Everyday Lifestyle မှာနေ့တိုင်းစီးဖို့အဆင်ပြေတဲ့ Sneaker ဆိုမှ ဝယ်ရတာ Worth ဖြစ်မှာလေ။ Editor ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ ကိုယ်က ဒီဇိုင်းလေးလှ လို့ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ဝယ်လိုက်တာ။ တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ်နေ့စဉ်သွားလာတဲ့အခါ မသင့်တော်တဲ့ အရောင်ကြောင်ကြောင်ကြားကြား ၊ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းကြီးတွေဖြစ်နေရင် တော်ရုံ မစီးဖြစ်တော့ဘူးလေ။ အဲ့တော့ ဝယ်ထားတာနဲ့မတန်သလိုဖြစ်သွားရော။
Sneaker ဒီဇိုင်းကြီးက ဘယ်လောက်ပဲပြန်လန်အောင်မိုက်နေပါစေ၊ လူတွေကြားမှာ ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးပြီး Trendy ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ့်အတွက်စီးရတာသက်တောင့်သက်သာမရှိဘူးဆိုရင် မဝယ်ပါနဲ့။ Sneaker ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း မိမိရဲ့ Shoe Size တွေကိုလည်းသေသေချာချာမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Sneaker Brand တွေကွာခြားတဲ့အလျောက် Size Measurement တွေကလည်း အနည်းငယ်ကွဲပြားတတ်လို့ပါ။ ပြီးရင် Sneaker ကို Online ကဝယ်တာထက်ကိုယ်တိုင် ဆိုင်မှာသွားဝယ်စေချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှ Fitting Try ကြည့်လို့ရသလို ကိုယ့်အတွက် Comfort ဖြစ်၊ မဖြစ်ဆိုတာကိုလည်း သိနိုင်မှာမို့ပါ။
Authentic နဲ့ Replica ပြဿနာ
အတုအစစ်က ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Authentic ကိုစီးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုလည်း ပိုပြီးယုံကြည်မှုတိုးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့လည်း Chunky Sneaker တွေစီးချင်ပေမယ့် Balenciaga Triple S တို့ Alexander McQueen တို့လို Designer Brand တွေကိုလည်း Spend မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဖိနပ် Replica တွေကို ဈေးသက်သက်သာသာစီးမယ့်အစား Zara တို့ Pull&Bear တို့လို Fashion Brand ထဲမှာ ပုံစံတူ ဒီဇိုင်းတွေရှိတာမို့ Zara တို့ကိုပဲရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။ Puma ၊ Adidas နဲ့ Nike တို့လို Sport Brand တွေကတော့ ပေးတဲ့ဈေးနဲ့ Quality က Worth ဖြစ်တာမို့ သင့်ကို ဘယ်တော့မှ နောင်တရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နာမည်ကျော် Sneaker တွေအကြောင်းနဲ့ Celebrity တွေရဲ့ Sneaker ရွေးချယ်မှုတွေ၊ Sneaker Shopping တွေ၊ Sneaker Unboxing Video တွေ၊ Sneaker ရူးသွပ်မှုတွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Complex Youtube Chanel မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Photo Credit - Complex original uploader
#MODA Style Note
#How to FindaPerfect Sneaker
ဘယ်သူမဆို အထာကျတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်ရာ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ဆိုတာရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Trend နောက်လိုက်ရင်း ၊ပတ်၀န်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှူတွေကိုခံရင်းကပဲ လူအတော်များများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ကို ပျောက်ဆုံးလာတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်း ကိုယ်ပိုင်styleတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဟာဘာလဲ ကိုယ်ဘာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်လဲ သိအောင်အရင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အ၀တ်အစားဟာ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ၊ ကိုယ့်အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်အနည်းဆုံးနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှူအပေးနိုင်ဆုံး အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒါဟာကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါပြီ။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ trend နောက်ကိုတတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးလိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ပုံသေသတ်မှတ်ချက်ဘောင်တစ်ခုအတွင်းကနေသာ trend နဲ့သမမျှတအောင် ၀တ်ဆင်တတ်ဖို့ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားဟာ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရဲရင့်မှူ ၊စိတ်လုံခြုံမှူ ၊ကျေနပ်မှူ ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှူတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီ ဆိုတာသေချာရင် အများအမြင်မှာလည်း အလိုလို ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအဓိကကျတဲ့အချက်တွေကများ ကိုယ့်အတွက်ယုံကြည်မှူအပြည့်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို တချက်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
1. အရည်အသွေးကောင်းကောင်း အရေအတွက်နည်းနည်း
ကိုယ်ရဲ့အ၀တ်ဗီဒိုထဲမှာ အ၀တ်အစားအများအပြားရှိနေဖို့ထက် ကိုယ့်ရဲ့စတိုင်လ် ၊ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုဖော်ညွှန်းနိုင်မယ့် အခြေခံကျတဲ့ အ၀တ်အစားအချို့ရှိနေဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ အနည်းစုသာရှိနေရမယ့် အဲဒီအရာတွေအတွက် ဈေးကောင်းကောင်းလေးသုံးပေးတာမျိုး ပိုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့် အ၀တ်အစားတွေဟာ အရေအတွက်နည်းနည်းနဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးသာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ Quantity ထက် Quality ကိုအဓိကထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။
အ၀တ်အစားရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အရောင်ရဲ့ အရေးပါမှူကလည်း အရမ်းကိုအဓိကကျတယ်ဆိုတာ အားလုံးသဘောပေါက်လက်ခံထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ်ဟာဘယ်အရောင်တွေပေါ်မှာ စိတ်ခံစားမှူအကောင်းဆုံးလဲ ၊ဘယ်အရောင်တွေပေါ်မှာ အာသီသအရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးခွန်းထုတ်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးအရောင်တွေကိုရွေးထုတ်ပြီး အခြေခံအရောင် list တစ်ခုဖန်တီးပါ။ အဲဒီအရောင်တွေပေါ်မှာပဲ အဓိကထား ပေါင်းစပ်၀တ်ဆင်ပြီး လူအများနဲ့ကွဲထွက်နေစေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Signature Look တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အ၀တ်အစားဟာ ကိုယ့်ကို စိတ်ကျေနပ်မှူပေးနိုင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Style လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှ ပိုပြီးလှအောင်ပဲ၀တ်၀တ် ၊ပုံမှန်ထသွားထလာအတွက်ပဲ၀တ်၀တ် ကိုယ်နှစ်သက်သလို Dress up or down ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေ ၊ဘယ်လိုရာသီဥတု၊ ဘယ်လိုအနေအထားမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Outfit ဟာ ကိုယ်နဲ့ပုံစံကျနပြီး ၊ကိုယ့်အတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိနေစေဖို့ပါပဲ။
ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုရင် အပြင်မှာ ဘယ် trend တွေပဲ ခေတ်စားစား ၊ဘယ်လိုအထူးအဆန်းပစ္စည်း တွေပဲပေါ်ပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ယုံကြည်မှူရှိရှိ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပြင်ပအရာ ပြင်ပရုပ်၀တ္ထုတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးခြင်းကိုမှမခံပဲ ကိုယ့်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံစံပေါ်မှာသာ trend , ရာသီဥတု ၊စိတ်ခံစားချက်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် အကောင်းဆုံး ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ရွေးချယ်မှူကို ပတ်၀န်းကျင်နဲ့ အရမ်းကြီးကွာဟနေတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် Accessorie များနဲ့ ပေါင်းထည့်မွမ်းမံနိုင်ပါတယ်။ ဖိနပ် ၊ခါးပတ် ၊ အိတ် ၊ ဆွဲကြိုး၊ လည်စည်း ၊မျက်မှန် အစရှိသဖြင့် Accessorie တွေကိုအသုံးပြုပြီး ကိုယ်ပိုင် စတိုင်လ်ကို trend နဲ့ balance ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိနိုင်သလို ဒီ accessorie တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Outfit ကို Dress up or down လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။